Fifaninanana Lahatsary: “Everyday Digital Native” – Alefaso Ny Safidinao Dieny Izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2012 17:49 GMT
Ny volana Janoary izahay dia nampahafantatra ny “Everyday Digital Native video contest” – Fifaninanana Lahatsary Maneho ny Isanandron'ny Vazimba Teratany eo amin'ny Tontolo Dizitaly, izay nokarakarain'ny Centre for Internet & Society (CIS), India, ary ny HIVOS. Ny fifaninanana dia manodidina ny lohahevitra hoe “ny Isanandron'ny Vazimba Teratany eo amin'ny Tontolo Dizitaly” ary mangataka ny fndraisan'anjaran'ireo lahatsary misy tantara maro izay mety hahatonga ny andavanandrom-piainantsika ho “dizitaly” na “niomerika”.
Ireo mpandray anjara dia nandefa ny fandraisan'anjaran'izy ireo voalohany talohan'ny 26 Janoary 2012 ary ireo vondronà mpitsara izay misy an'i Shashwati Talukdar, Leon Tan, Jeroen van Loon, Becky Band Jain ary Namita A. Malhotra dia nisafidy lahatsary miisa 12 hiatrika ny fihodinana faharoa. Ny 5 Voalohany nandresy tamin'ny fifidianan'ireo mpijery no hahazo ny loka goavana.
Ny faha 10 Martsa 2012 no nanomboka ny fifidianana. Azonao jerena eto ireo lahatsary tafakatra tamin'ny dingana famaranana. Raha hifidy ny lahatsary tianao indrindra ianao dia, kitiho eo amin'ny lohatenin'ilay lahatsary ary kitiho bokotra famantarana ny ‘Like’ (Tiako) misy eo amin'ilay pejy manokana. Mifarana ny 31 Martsa 2012 ny fifidianana ary lahatsary miisa dimy be mpifidy indrindra no hambara ho mpandresy amin'ny 1 Aprily 2012.
Ireo fandraisana anjara dia avy amin'ny firenena manodidina an'i Inde, Kenya ka hatrany Kolombia ary manasongadina lohahevitra isan-karazany. Ireto misy ohatra miisa roa:
Ny lahatsary fohy iray izay hita etsy ambony ary mitondra ny lohateny hoe “Digital Coverage in a Digital World” – Fandrakofana Dizitaly anatinà Tontolo Dizitaly- notontosain'i Thomas Burks (T. J. Burks), avy any USA dia mampiseho ny ambangovangony izay nentinay tamin'ny teknolojia niomerika. Izy ity ihany koa dia mampahafantatra ny fomba fampiasànay ny haino aman-jery sosialy sy ny aterineto, mba hanampiana ny fandraharahàna ataonay hiroborobo amin'ny fomba haingana eo amin'ny sehatry ny fanatontosàna horonan-tsary sy fanaovana dokam-barotra.
Ny “Digital dance” dia hetsika nataon'i Cijo Abraham avy any Inde hampibaribariana ny tanjaky ny media dizitaly. Eo amin'ny lahatsary etsy ambony dia naharihary fa ny fanentanana hanome rà dia afaka alefa tsara tokoa amin'ny fampiasàana ny Twitter hisintonana ny sain'ny olona.
Hajian-tsary: I James Mlambo avy ao Harare, any Zimbaboe, mpandray anjara iray izay manana ny lahatsary “I am a Ghetto Digital Native” – Vazimba Teratany Avy Eny A,min'ny Faritra Mahantra Aho – dia voasokajy ho isan'ireo ho fidiana.